IRipple Archives-Funda ukuRhweba
Uhlalutyo lwexabiso le-Ripple 2022: Imiyalelo yeNkundla ye-SEC ukukhulula iNtetho ka-Ethereum kaHinman
Kwabakho isiphithiphithi esincinci I-Ripple (XRP) uluntu namhlanje njengoko inkampani yentlawulo ikhuseleke enye uloyiso encinane kwi-SEC eqhubekayo vs. Ripple isimangalo, njengoko ijaji kwityala wayalela iKhomishoni ukuba akhulule amanye amaxwebhu ilungelo elibaluleke kakhulu ityala.
UMantyi uJaji uSarah Netburn usanda kugweba ukuba i-US Securities and Exchange Commission kufuneka inikezele ii-imeyile eziqulethe intetho kaWilliam Hinman owayesakuba ngumlawuli wezezimali kwi-Ethereum. Abaxhasi be-Ripple bakholelwa ukuba intetho yegosa langaphambili le-SEC ibalulekile ekuqinisekiseni ukuba i-SEC inikeze isaziso esifanelekileyo kwinkampani yokuhlawula.
Nangona kunjalo, i-SEC iye yathetha ukuba i-Ripple Labs, abarhwebi, kunye nabatyali-mali babesazi isimo se-cryptocurrency njengokhuseleko ukususela ngo-2013. Kungakhathaliseki ukuba, intetho ka-Hinman ibonisa ukubulawa kwee-lopholes kwingxabano ye-arhente ngokuchasene nenkampani yokuhlawula.
Ukususela ngoDisemba ka-2020, abaLawuli beRipple Labs baye baphantsi kovavanyo lomthetho ngokuthengisa ukhuseleko olungabhaliswanga, olutyholwa ngokuphula umthetho wezokhuseleko. Nangona kunjalo, emva kwexesha elingaphezu konyaka emva naphambili, inkundla iye ekugqibeleni iyalele i-SEC ukuba ikhulule intetho ebalulekileyo ye-Hinman. Amalungu oluntu achulumancile emva kwesigwebo njengoko inkampani iye yafumana enye impumelelo kwisimangalo.
Oko kuthethiweyo, imithombo yangaphakathi ithi ukufunyanwa kweengcali kunokulibaziseka ukuya kutsho nge-28 kaFebruwari 2022.
Uqikelelo loNyaka lweRipple (2022)
Emva kokunyuka kwe-$ 1.9637 ngo-Apreli, elandelwa yi-May-Juni ye-market slump, i-XRP iye yalwa ngokungenanto ukuze ibuyele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili kodwa ayikwazi ukudlula umqobo we-$ 1.3250. Abahlalutyi abaninzi baye bakhetha ukuba ubuthathaka kwi-XRP buza ngenxa yecala eliqhubekayo kunye ne-SEC.
XRPUSD – Itshathi yeVeki yeBitfinex. Umthombo: TradingView
Oko kuthethiweyo, sinokuqiniseka ukuba ukuqukunjelwa kwetyala kunokubuyisela i-cryptocurrency yangaphambili. Olu qikelelo lwe-bullish luba lunomdla ngakumbi xa siqaphela ukuba ityala liye, ukuza kuthi ga ngoku, liqhubekile lixhasa i-Ripple kwaye lingavala kunye nommangalelwa eliphumelele ityala. Esi siphumo sinokutyhala i-cryptocurrency enkulu esibhozo kwi-3 yeedola ngo-2022 kwaye mhlawumbi ibe phezulu.
I-XRP okwangoku irhweba ngokunyuka kwexesha elide njengoko i-bullish sentiment ibuyela kwimakethi ebanzi ye-crypto, kulandela ukuqala kancinci ukuya ku-2022.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.8000, i-$ 0.8250, kunye ne-$ 0.8500, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.7500, i-$ 0.7300 kunye ne-$ 0.7000.
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 36.7 billion
Ukulawula kweRipple: 1.81%
Inqanaba lentengiso: #8
tags Cryptocurrency, yaqikelelwa, iindaba, Ripples, Uhlalutyo lobuGcisa, XRP
I-Ripple Whales ihambisa iiBucks ezinkulu ngokujikeleza phakathi kweToni yeMarike exinezelekileyo
Ukuhlaziywa: 5 January 2022
Umboneleli we-on-chain analytics Whale Alert usanda kutyhila ukuba I-Ripple (XRP) kunye noBinance benze iintengiselwano ezininzi ze-XRP ezixabisa ngaphezulu kwe-170 yezigidi zeedola kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo.
I-wallet ye-Ripple yahambisa i-40 yezigidi zemali (exabisa i-33.2 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela), kwenye ye-wallet yayo yogcino ebizwa ngokuba yi-RL 18-VN. Esi sikhwama se-backup siyindlela ekhethiweyo yokudlulisa i-XRP ngaphandle kweendawo zenkampani.
Okwangoku, i-behemoth cryptocurrency exchange Binance ithumele kwaye yafumana ixabiso elibalulekileyo le-XRP kwiintengiselwano ezine. Utshintshiselwano lwe-crypto ludluliselwe kwaye lwafumana malunga ne-122 yezigidi ze-XRP (exabisa i-101.2 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela) phakathi kwee-wallet zayo zangaphakathi kunye nezinye iidilesi ze-crypto ezingaziwa.
Nangona kunjalo, umboneleli wedatha ye-XRP ye-analytics uBithomp kamva wabonisa ukuba ezi "Izipaji ezingaziwa" yayiyeye-Huobi exchange kunye ne-wallet ye-Binance engaziwa. U-Huobi udlulisele i-45 yezigidi zemali (exabisa i-37.3 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela) kwi-Binance, ngelixa enye i-wallet engaziwa idlulisele i-118 yezigidi ze-XRP (exabisa i-$ 97.9 yezigidi ngexesha lokushicilela) phakathi kweedilesi zangaphakathi ze-Binance.
I-Ripple ikhuphe i-1 yezigidigidi ze-XRP (exabisa i-830 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela) kwi-akhawunti yayo ye-escrow. Nangona kunjalo, i-800 yezigidi zeengqekembe zabuyiselwa kwi-escrow ngelixa i-200 yezigidi eseleyo (exabisa i-166 yezigidi zeedola ngexesha lokushicilela) yangena kwi-akhawunti ye-Ripple ukuze isetyenziswe ngakumbi.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka abukele - nge-5 kaJanuwari
Imakethi ye-crypto iyaqhubeka nokuhlupheka kwembalela enkulu yokuthengisa njengoko i-XRP ihlala ithotyiwe malunga ne-0.8250 yenkxaso yomgca. Okubangela umdla kukuba, i-cryptocurrency yesibhozo ngobukhulu ngoku irhweba phantsi kwempembelelo yam yokunyuka kwe-trendline yeeveki ezininzi (i-bullish factor) kunye neyure-4 ye-50 SMA (i-bearish factor).
XRPUSD – Itshathi yeyure ezi-4 kwiBitfinex. Umthombo: TradingView
Ukuqhawuka kwelinye lala manqaku obugcisa kufuneka kuncede i-XRP iqonde ukukhawuleza kokurhweba kwaye irekhode intshukumo eqhubekayo kwindawo yokuphumla. Ukungaphumeleli ukuthumela nakuphi na ukuqhawuka kwexabiso kuya kushiya i-cryptocurrency inqunyanyisiwe phakathi koluhlu lokudityaniswa kweentsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.8500, i-$ 0.8800, kunye ne-$ 0.9000, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.8250, i-$ 0.8000 kunye ne-$ 0.7500.
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 39.1 billion
Ukulawula kweRipple: 1.76%
tags I-Cryptocurrency, iindaba, Ripples, Uhlalutyo lobuGcisa, XRP
URipple uqhathiwe kwisikhundla sesibini: uJohn Deaton
Ngokutsho kweDeaton Law Firm, ekhokelwa nguJohn Deaton, i-US SEC inomkhethe obalulekileyo we-Ethereum ngaphezulu. I-Ripple (XRP).
UDeaton usanda kuthumela intambo kwi-Twitter ngoMvulo kunye nobungqina bamabango akhe. Ngokutsho kwegqwetha, ngoDisemba 13, 2017, uWilliam Hinman, owayeyintloko yesebe lezemali yekhomishini ngelo xesha, kunye noJoseph Lubin, i-CEO ye-ConsenSys, baya kwintlanganiso eyathi. "Akazange ayikhathalele i-Ethereum ICO," kodwa yaba “ukuqala ‘komanyano’ oluzuzisa ngokufanayo. UDeaton wabhala kuTwitter esithi:
"NgoJanuwari 25, 2018, uSihlalo we-SEC [uJay] Clayton wadibana noChris Dixon wase-Andreessen Horowitz (a16z) ukuqokelela abadlali abakhethiweyo beshishini kwaye bangenise iphepha malunga nendlela umlawuli kufuneka ajongane ngayo ne-asethi yedijithali."
Umseki we-Deaton Law Firm wongezelela ukuba i-XRP "yayiyeyesibini ngobukhulu i-asethi ye-crypto ngokwenza imali kwimarike" ngelo xesha. Ngaloo nto, unokulindela ukuba amalungu e-crypto-asethi enkulu kwishishini abekhona kwiqela loshishino. Nangona kunjalo, uDeaton ukhankanye ezinye iingxelo ezibonisa ukuba u-Ripple akazange amenywe nguDixon ukuba abe yinxalenye yeli qela leshishini.
Nangona kunjalo, uDeaton waphawula ukuba iqela libandakanya abameli abanxulumene ne-Ethereum ecosystem. I-XRP iye yatshitshiswa kwindawo yesixhenxe, ngelixa i-Ethereum ibambe indawo yesibini.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka ebukele- nge-29 kaDisemba
I-Ripple iqalise kwakhona kwikhosi ye-bearish ngoLwesithathu, ilandela ukugatywa okubukhali kwi-barrier ye-0.9500 ye-$ ngoMvulo. Olu tsalo lwe-bearish luza emva kokudityaniswa kwexesha elide malunga nesiseko se-$ 0.9275 ukususela kwiKrisimesi, emva kokukhatywa kwe-1 ye-round ye-23 kaDisemba.
I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ngoku ithengisa ngenceba yenkxaso ye-0.8250 yeedola, njengoko iibhere zigcina uxinzelelo. Ukunikezelwa kwimeko yangoku yemarike, idiphu engaphantsi kwale nkxaso ibalulekileyo ibonakala inokwenzeka kwixesha elisondeleyo kwaye inokunyanzela i-XRP ukuba iphinde ivavanye inkxaso ye-0.7770 yeedola.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.20 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 39.4 billion
Ukulawula kweRipple: 1.77%
I-Ripple ityhala isondele kwi-$ 1 kwi-Sologenic Airdrop Excitement
I-Ripple (XRP) wenze amanyathelo afanelekileyo kule veki efumana ngaphezulu kwe-13% njengoko imarike ebanzi ibuyela.
Okwangoku, i-Ripple irekhode inani elikhulu leentengiselwano ze-whale kwiiyure ezidlulileyo ze-48. I-Whale Alert, i-platform ye-analytics ye-on-chain analytics, isanda kutyhila i-17,700,000 XRP (exabisa i-$ 16.8 yezigidi ngexesha lokushicilela) ukusuka kwi-Bitso ukuya kwi-wallet engaziwa. Iqonga liphinde labika i-20,000,000 ye-XRP yokudluliselwa kwi-Bithumb kwi-wallet engaziwayo.
I-Whale Alert iphinde yabona ukudluliselwa kwe-XRP kweemali ze-20,000,000 kwi-Coins.ph kunye nenye i-20,000,000 XRP kwi-Bitso. Ekugqibeleni, iqonga libonise ukuthengiselana kwe-whale apho iqumrhu lihambise i-449,300,000 XRP (exabisa i-$ 426.8 yezigidi ngexesha lokushicilela) ngoDisemba 19 kwiindidi ezimbini.
Ngaphandle kokugqithiswa kwe-whale yakutshanje, abanye bathi imfuno yangoku ye-XRP ivela kubantu abafuna ukufumana izandla zabo kwi-500 yezigidi ze-Sologenic airdrop.
I-Sologenic, i-XRP ye-leveraging firm, isanda kwazisa ukuba iya kulahla ithokheni ebizwa ngokuba yi-SOLO kubanikazi be-XRP. Injongo yeprojekthi kuku "Yiba yeyona projekthi inefuthe kwi-blockchain esekwe kwihlabathi ngokuvala umsantsa phakathi kweemarike zemali zemveli kunye ne-cryptocurrencies."
Ukongezelela, le projekthi iphinda icwangcise ukukhulula enye i-airdrop kunye nethokheni ebizwa ngokuba yiCoreum (CORE). I-Sologenic ibonise ukuba abasebenzisi abanomdla banokuthengisa i-SOLO kwi-platform yayo yokutshintshiselana, yongeza ukuba uphawu luya kuba ne-capped supply ye-400 yezigidi zemali. Ekugqibeleni, iqela le-Sologenic liqaphele ukuba iithokheni ze-SOLO ziya kukhutshwa kwi-XRP Ledger (XRPL).
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka ebukele- nge-22 kaDisemba
Kanye kunye noninzi lwemarike ye-crypto, i-XRP irekhode ukuphindaphinda okunempilo njengoko abatyali-mali behlakulela umdla wempahla yomngcipheko. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ngoku isendleleni yokubuyisela uphawu lwe-$ 1 ukususela ekubeni yawela ngaphantsi kwaloo mgca ekupheleni kukaNovemba.
I-XRP okwangoku iphumle kwi-0.9500 yenkxaso kwaye inokuthumela ukulungiswa kwi-$ 0.9200 ngokukhawuleza ukuba iinkunzi zeenkomo ziphuma kwi-steam. Nangona kunjalo, olu lungiso kufuneka luncede i-XRP iququzelele ukuphindaphinda ukuya kwi-$1 kwaye mhlawumbi ibe phezulu kwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 1.0000, i-$ 1.0500, kunye ne-$ 1.1000, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.9275, i-$ 0.9000 kunye ne-$ 0.8800.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.25 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 42.8 billion
Ukulawula kweRipple: 1.9%
tags Cryptocurrency, iindaba, Ripples, Uhlalutyo lobuchwephesha, XRP
I-Ripple Steadies Ngaphandle kweeNtengiselwano eziBalulekileyo zeWhale zokuTshintshela iiWallets
Ukuhlaziywa: 8 Disemba 2021
Ngokwengxelo, I-Ripple (XRP) irekhode iintshukumo ezinkulu zengqekembe kwiiyure nje ezimbalwa phambi kokuba ichache ngoku. Ngexesha lokuthengiselana, i-XRP ithengiswa kwi-0.8000 yeedola. Ngokutsho kwe-U.namhlanje, ixabiso leentengiselwano lishwankathelwe ukuya kwi-76 yezigidi zeedola.
I-traction yokuqala kunye neyona inkulu ibone i-40 yezigidi ze-XRP (Ixabisa i-32 yezigidi zeedola ngexesha lokuthengiselana) ukusuka kwi-akhawunti ye-Ripple esemthethweni ukuya kwi-wallet engaziwayo ngoku ibamba i-30 yezigidi zemali. Iingxelo zibonisa ukuba i-wallet engaziwa ngokukhawuleza yakhupha imali kwenye i-wallet engaziwayo, eyathumela imali kwi-central exchange exchange.
Oko kwathiwa, uluntu lwe-XRP luthathe oku njengomqondiso wokuba i-Ripple isebenzise ezi ngxowankulu ukukhupha ezinye zezinto ezibambisene nazo ekuhanjisweni okujikelezayo ngendlela eyimfihlo.
Okubangel 'umdla kukuba, ukuthengiselana kwe-whale yesibini akuzange kuzikhathaze ukufihla isilingo sayo njengoko ithumele izigidi zeengqekembe ngokuthe ngqo kutshintshiselwano oluphakathi. I-whale engaziwa idlulisele i-20 yezigidi zemali (ezixabisa i-16 yezigidi zeedola ngelo xesha) kwi-Bitso kwaye yafumana phantse isixa esifanayo kwiyure.
Idatha ibonisa ukuba le mnenga idluliselwe i-20 yezigidi ze-XRP kwi-crypto exchange, ishiye i-1.8 yezigidi zemali kwi-wallet hit, kwaye idlulisele i-18.2 yezigidi zemali kwidilesi yokuqala. Oko kwathiwa, injongo yale ntengiselwano engaqhelekanga ayikaziwa.
Nangona kunjalo, i-XRP ayikaphenduli kwezi ntengiselwano, kwaye abaninzi bakholelwa ukuba ayinakuze isabele kubo.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka ebukele- nge-8 kaDisemba
Ukulandela ukuntlitheka komnqantsa, i-XRP ibonakala ngathi yaphukile kwi-bearish tripwire yam, nangona ikwicala elisingise kuluhlu. I-cryptocurrency igcine i-bias yokurhweba, ukurhweba phakathi kwe-$ 0.8500 kunye ne-$ 0.8000 kwiiyure ezingama-48 ezidlulileyo.
Ngaloo nto, ndicinga ukuba abarhwebi basecaleni, belindele ukuqhawuka kuyo nayiphi na indlela kwixesha elisondeleyo, ukuqinisekisa i-bias bias. Nangona kunjalo, uhlalutyo lwam lweemarike ezibanzi lubonisa ukuba i-rebound iqhuba kakuhle kwaye inokuqhuba i-XRP ukuya kwi-0.9000 ye-$ ukumelana ngokukhawuleza.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 0.8000, i-$ 0.8800, kunye ne-$ 0.9000, kwaye amanqanaba am enkxaso yi-$ 0.8250, i-$ 0.8000 kunye ne-$ 0.7500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.35 zezigidi
Ukulawula kweRipple: 1.68%
IiNodi ze-Ripple ziwa ngaphandle koLungelelwaniso njengoko iNethiwekhi ifumana ukoyiswa yiTrust Line Transactions
Ukulandela umba womnatha wamva nje, uye wacinezela ngakumbi ukuba i-Ripple iphumeze ukuphuculwa kwayo "I-Trust Line" kwi-XRP Ledger (XRPL).
Izolo, iinodi ezimbini zeXRP eziqhutywa yiRipple, "s1 kunye ne-s2," yaphula ungqamaniso nomsebenzi womnatha. Ikhefu lahlala ngaphezu kweeyure ezintlanu, kunye nabasebenzisi be-wallets non-custodial efana ne-Xuum kunye ne-xrplcluster.com ehlupheka kakhulu.
Nangona i-XRP iququzelela ngokulula ii-transactions ze-1500 ngesekhondi (tps), ayinayo i-akhawunti ye-Trust Line transactions kwi-network.
Xa abasebenzisi benethiwekhi befumana iintlawulo kuyo nayiphi na i-cryptocurrency ngaphandle kwe-XRP, kufuneka bakhusele i-Trust Line kwi-akhawunti yokuqala ye-crypto asset. Oku kukhusela abasebenzisi kwi-spam yamathokheni kwaye kubavumela ukuba bakhethe izinto abazithandayo ngaphandle kokufumana nayiphi na imiba kwi-wallet ye-XRP okanye ibhalansi.
Oko kuthethiweyo, inani leTrasti ezikhoyo kwiXRP Ledger ligqithise ubuninzi obuqikelelweyo babaphuhlisi, nto leyo ekhokelele kuphazamiseko longqamaniso kunye ne XRP Ledger's public nodes. Ngelixa abaphuhlisi bezamile ukonyusa iindawo zokuhlala kunye namaqela, abakakulungeli umthamo ophezulu wentengiselwano yeTrasti.
Ngeli xesha, utshintshiselwano kwizicelo ezisebenzisa i-s1 kunye ne-s2 nodes zimisiwe okanye ziphinde zabuyiselwa kwezinye iindawo ezifana ne-xrplcluster.com. Kwangaxeshanye, abaphuhlisi basebenza ngokuzimisela ukunyusa umthamo woluntu kunye nokulungisa umba.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka ebukele- nge-1 kaDisemba
Ripples ifumene i-bullish traction kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo njengoko i-Omicron-induced enkulu yokuthengisa isihla. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu iphinde yavuka ngaphezu kwe-1 yedola izolo, iguqula i-4-iyure ye-50 SMA ibe ngumgca wenkxaso.
Oko kwathiwa, i-XRP ngoku ijolise kumgca we-pivot we-$ 1.0500 olandelwa yi-$ 1.1000 ye-pivot top. Ndilindele ukubona ukuqhubela phambili kwe-bullish kwiiyure ezizayo kwindawo yepivot njengoko iimethrikhi ezikwikhonkco zicebisa ukubuya okunempilo kwimakethi ebanzi ye-crypto kungekudala.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 1.0500, i-$ 1.1000, kunye ne-1.1500, kwaye amanqanaba am enkxaso ayi-$ 1.0000, i-$ 0.9500, kunye ne-$ 0.9275.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.65 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 47.6 billion
Ukulawula kweRipple: 1.79%
I-Ripple vs. SEC: I-Brad Garlinghouse ilindele ukuba iNkundla iphele kuNyaka ozayo
Ukuhlaziywa: 24 Novemba 2021
I-Ripple (XRP) I-CEO uBrad Garlinghouse usandul 'ukuvakalisa ithemba lakhe malunga ne-XRP eqhubekayo vs. UGarlinghouse wenze izimvo kudliwanondlebe kunye ne-CNBC ngoMvulo.
Ecacisa ngentelekelelo yakhe yexesha lokumangalela, i-CEO yaphawula ukuba:
“Sibona inkqubela entle kakhulu nangona inkqubo yenkundla ihamba kancinane.
Ngokucacileyo, sibona imibuzo elungileyo ebuzwe yijaji. Kwaye ndicinga ukuba ijaji iyaqonda ukuba oku akukhona nje ngeRipple. Oku kuya kuba neempembelelo ezibanzi.”
I-US Securities and Exchange Commission yathatha i-Garlinghouse kunye no-co-founder uChris Larsen enkundleni yangoDisemba wokugqibela, etyhola ukuba abaphathi kunye neRipple Labs bathengise i-1.3 yeebhiliyoni zeedola ze-XRP kunikezelo lwezibambiso ezingabhaliswanga. Oko kwathiwa, abamangalelwa baye baphikisana kakhulu ukuba i-XRP ayifaki phantsi kokuhlelwa kokhuseleko.
Ngeli xesha, i-Ripple isandula ukupapasha isindululo sesakhelo solawulo se-cryptocurrencies kubalawuli kwihlabathi liphela, elinesihloko. "Indlela yokwenyani yoLawulo lweCryptocurrency."
Garlinghouse wachaza ukuba "Umgaqo-nkqubo ocetywayo yindlela entlantlu-ntathu yento enokwenziwa ngoku," Ukongeza ukuba ivela kwiRipple's "Unxibelelwano oluthe ngqo nabalawuli kunye nabaqulunqi bomgaqo-nkqubo we-bipartisan." UBrad Garlinghouse uphinde waqinisekisa ukuba i-SEC ayinikezi ngcaciso yolawulo lwe-cryptocurrency.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka abukele - ngoNovemba 24
I-XRP ityibilike ngezantsi kwe- $1.100 ebalulekileyo ye-$1.0500 yepivot zone, njengoko "I-cryptocurrency yebhanki" kunzima ukugcina iibhere phakathi kwe-FUD yentengiso. I-XRP okwangoku irhweba ngokuhla kwe-trendline, ebonakala ngathi ithatha i-cryptocurrency ukuya kumanqaku e-$1.
Iinkunzi kufuneka zixhathise le donsa ye-bearish kwaye ibambelele kwi-$ 1.100 - $ 1.0500 pivot zone njengoko sisiya ekupheleni konyaka. Ininzi yale ngqungquthela ye-bearish ivela kwi-SEC ehlala iphikisana ne-XRP yecala, eye yatsala phantse unyaka ngoku.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.57 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 48.7 yeebhiliyoni
Ukulawula kweRipple: 1.89%
I-Ripple ipapasha iSincomo soLawulo lwe-Crypto Industry
Ukulandela emanyathelweni kaCoinbase, I-Ripple (XRP) ipapashe isindululo sesakhelo solawulo se-cryptocurrency ebizwa ngokuba yi-cryptocurrency "Indlela yokwenyani yoLawulo lweCryptocurrency" izolo. Inkampani yachaza ukuba isindululo saso "Umbono wendlela izikhokelo zolawulo lwemali ezikhoyo zingasetyenziswa njani ukuqhubela phambili inguqulelo nokuphucula ukhuseleko lwabathengi kunye neemarike," ukucacisa ukuba:
"Namhlanje, sinebhongo ngokukhulula umbono wethu 'weNdlela yokwenyani yoLawulo lwe-Cryptocurrency,' isakhelo esenzelwe ukubonelela ngendlela ekhawulezileyo kunye nepragmatic kwi-cryptocurrency kunye nolawulo lwe-asethi yedijithali eUnited States."
Inkampani ye-blockchain yongezelela ukuba ikholelwa ukuba "Ezona ziphumo zomgaqo-nkqubo zingcono kakhulu zinokufezekiswa ngentsebenziswano yoluntu-yabucala, ukulungelelanisa izikhokelo zolawulo ezikhoyo, kunye nokukhuthaza iibhokisi zesanti ezintsha ze-crypto," izindululo ezintathu ezingundoqo eziphawulwe kwisindululo.
Inkampani iqaphele ukuba:
"I-Ripple ikholelwa ukuba isindululo sethu siya kuqinisekisa ukuba i-US iyaphumelela ekukhuliseni i-crypto innovation ngaphakathi kwemida yayo ngelixa igcina ukhuseleko oluluqilima lwabathengi kunye nabatyali-mali eyaziwa ngalo."
Ethetha malunga nokupapashwa, i-CEO yeRipple uBrad Garlinghouse wachaza ukuba:
“Inkqubo-sikhokelo yethu ecetywayo yomgaqo-nkqubo yindlela entlantlu-ntathu yento enokwenziwa ngoku ukunika ingcaciso kwelinye lawona mashishini akhula ngokukhawuleza e-US Kukwasisiphumo sokusebenzisana ngokuthe ngqo nabalawuli kunye nabaqulunqi bomgaqo-nkqubo bamacala amabini.
Umzi-mveliso we-crypto unyukela kwiplate yentsebenziswano yoluntu-yabucala kumgaqo-nkqubo - akukho mathandabuzo ngawo - kwaye siya kuqhubeka sifuna ukusebenza kunye kwindlela efanelekileyo eya phambili. "
Inkampani yagqiba ngokuqaphela ukuba: "Onke amanyathelo acetywayo axoxwe kwesi sikhokelo afuna ukunika ingcaciso esemthethweni kushishino, iimarike, kunye nabathengi ngendlela ye-ad hoc, [indlela] yokunyanzeliswa kwemithetho engenakho."
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka abukele - ngoNovemba 17
I-XRP iye yakhubeka kakhulu kwinqanaba layo eliphantsi ngoNovemba, emva kokuphazamiseka kwemarike okubangelwa kukuthatha inzuzo enkulu. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu yawela kwisiseko sayo senkxaso ekhoyo kwi-$ 1.0500, iqiniswe yindlela yam yokunyuka kunye ne-$ 1.1000 - $ 1.0500 pivot zone izolo. I-XRP iye yaphinda yaphinda yavela kancinci kwingozi kwaye ngoku iyarhweba ecaleni kwendlela yeenyanga ezininzi.
Oko kwathiwa, i-XRP ngoku ingene kwi-oversold kwaye “Uloyiko” imimandla, ebonisa ukuba i-bearish move ayinakuphumelela. Ndilindele ukubona ipatheni esecaleni ejikeleze indawo yam yepivot kwixesha elikufuphi.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 1.1000, i-$ 1.1500, kunye ne-1.2000, kwaye amanqanaba am enkxaso ayi-$ 1.0500, i-$ 1.0000, kunye ne-$ 0.9500.
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 50.5 billion
Ukulawula kweRipple: 1.96%
I-Ripple yokuQalisa iNkonzo egxilwe kwiShishini njenge-XRP iBuyisa i-10-Veki ephezulu
Ukuhlaziywa: 10 Novemba 2021
I-Ripple (XRP) ithathe inyathelo elongezelelweyo ekudaleni iimveliso ze-crypto ezintsha njengoko inkampani ilungiselela ukuqalisa imveliso entsha ukubonelela abathengi beziko ngeenkonzo ze-asethi zedijithali. Ngokutsho kwe-CEO yeRipple uBrad Garlinghouse, inkonzo entsha egxile kwishishini, ebizwa ngokuba yi-Liquidity Hub, iya kusungulwa kunyaka ozayo.
Nje ukuba imveliso iphile, amaziko aya kuba nokukhetha ukufumana zonke ii-asethi ezinophawu ukusuka kwi-Ripple nge-Liquidity Hub. Imveliso entsha ivumela amashishini ukuba afikelele kwi-cryptocurrencies ngokusebenzisa amaqonga amaninzi, kubandakanywa abenzi beemarike, utshintshiselwano lwe-crypto, iidesika ezingaphezulu kwe-counter (OTC) kunye nabanye abaninzi.
Ngexesha lokushicilela, iqela lophuhliso liqhuba iimvavanyo zokugqiba kwi-Liquidity Hub, ngokwengxelo. Ngokukhawuleza emva kokusungulwa kwayo, i-Liquidity Hub iya kunika inkxaso ye-crypto asethi ephezulu, njenge-Bitcoin (BTC), i-Ethereum (ETH), i-Litecoin (LTC), i-Ethereum Classic (ETC), kunye ne-XRP.
Ukuphawula malunga nophuhliso, uMphathi Jikelele weRippleNet u-Asheesh Birla waqinisekisa ukuba iqela lakhe lisebenzise ngempumelelo iteknoloji ye-crypto sourcing ukuxhasa iinkonzo ze-On-Demand Liquidity (ODL) zenkampani ngamaxesha amaninzi kwixesha elidlulileyo. UBirla wongeze ukuba:
"Abathengi bethu banokufuna ukufikelela kwindawo enye ethembekileyo yokuthenga, ukuthengisa, kunye nokubamba ii-asethi ze-crypto eziye zanika amandla umsebenzi wethu omkhulu kumaziko emali."
Kuyathakazelisa ukuba inkampani ye-blockchains nayo ibonise (ixesha elide) izicwangciso zokwazisa iimpawu ezininzi zokuxhasa i-crypto staking kunye nemveliso yemveliso.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka abukele - ngoNovemba 10
Ukulandela ukuhlanganiswa kweentsuku ezimbini ngaphantsi kwezinga elibalulekileyo le-$ 1.2700, i-XRP ekugqibeleni ibuyisele indawo ye-$ 1.3000 okokuqala kwiiveki ezilishumi. I-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ichukumise i-$ 1.3250 ephezulu kwimizuzu embalwa edlulileyo, ebonisa ubukho obukhulu be-bullish.
Oko kwathiwa, iinkunzi zenkomo kufuneka zityale ikhandlela vala ngaphezu kwe-$ 1.3000 uphawu lwezengqondo ukuze kugcinwe oku kubuyiselwa kwaye kujolise kwi-$ 1.3800 ephezulu. Ukungaphumeleli ukwenza oko kunokulibuyisela ixabiso kwi-1.2700 zone.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 1.3500, i-$ 1.3800, kunye ne-1.4000, kwaye amanqanaba am enkxaso ayi-$ 1.3000, i-$ 1.2700, kunye ne-$ 1.2500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.94 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 62.7 billion
Ukulawula kweRipple: 2.13%
I-Ripple Rebounds ukuya kwiiVeki eziSixhenxe eziPhakamileyo phakathi kweSibhengezo se-wXRP
I-Ripple (XRP) kubonakala ngathi iphinde yafumana inqanaba eliphucukileyo loluvo lwe-bullish emva kophuhliso oluhle olusuka kumlo oqhubekayo wezomthetho kunye ne-SEC kunye nesibhengezo esiGqithiweyo.
Igqitywe kutshanje ivakalise ukuba iya kuxhasa i-XRP (wXRP) kwi-blockchain ye-Ethereum ngoDisemba. Isibhengezo sicacise ukuba ithokheni ye-wXRP iya kufumana i-backing 1:1 yi-XRP kwi-ecosystem ye-DeFi.
Ethetha ngophuhliso lwamva nje, uRipple CTO uDavid Schwartz ubhale kwi-tweet ukuba:
“I-XRP esongiweyo iza e-Ethereum! Iindaba ezimnandi kwabo bafuna ukufikelela kwi-XRP ngaphakathi kwee-wallets ze-Ethereum, i-DeFi, kunye nezivumelwano ezihlakaniphile.
Yi-multi-chain, emva kwayo yonke into. "
Okwangoku, i-XRP Esongelweyo iya kukhusela i-XRP ethile elugcinweni kunye ne-Hex Trust, umboneleli wokugcinwa kwe-crypto kwiziko lemali. Oko kuthethiweyo, umahluko omkhulu phakathi kwe-XRP kunye ne-wXRP kukuba le yokugqibela iluncedo kwi-Smart Contracts.
Njengoko abantu abanomdla ngakumbi banikezela ngenkunzi enkulu, i-wXRP yonyusa ukusetyenziswa kunye nemfuno kwi-ecosystem ye-DeFi kwaye iya kutsala i-XRP.
Nangona kunjalo, abanye abaxhasi be-XRP baye bagxeka uphuhliso olutsha oluchaza iifizi eziphezulu zokuthengiselana kwinethiwekhi ye-Ethereum njengengxaki. Nangona kunjalo, ukongezwa kwe-XRP kwinethiwekhi yeentambo ezininzi kufuneka kube nefuthe elihle kakhulu kwi-XRP's utility.
Ngexesha elincinane emva kwesibhengezo esiSotshiweyo, i-XRP yatsiba ngaphezulu kwe-10% kwaye yaqalisa indlela eya phezulu. Okwangoku, abaninzi abaqapheli balindele ukuba i-SEC vs. Ripple Labs isimangalo sifike ngokukhawuleza.
Amanqanaba eRipple angundoqo ekufuneka abukele - ngoNovemba 3
Emva kwe-rally ebukhali ukuya kwi-$ 1.2350 yeeveki ezisixhenxe namhlanje ekuseni, i-XRP yafumana i-bearish blowing kwi-1.1500 yenkxaso yenkxaso yeebhere zebango lokulawula i-$ 1.2250 phezulu. Esi senzo sexabiso siza emva komjikelezo wexesha elide lokuhla ukuya kwi-$ 0.9500 ephantsi, elandelwa kukuhlanganiswa phakathi kwe-$ 1.1000 - i-$ 1.0500 yendawo ye-pivot.
Ngexabiso elikhoyo ngoku kwi-$ 1.1660 indawo, ndilindele ukuphinda ndibuyele kwi-$ 1.1500 ye-intraday ephantsi, ilandelwa yi-bullish eqhubekayo kwi-$ 1.2000.
Nangona kunqabile kakhulu okwangoku, ukuwa kwindawo ye-pivot ye-1.1000 yeedola kunokuphazamisa iinzame ezisanda kuqokelelwa ze-bullish kwaye kuphinde kuqale ukunyusa amandla kwi-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu.
Okwangoku, amanqanaba am okumelana ne-$ 1.2000, i-$ 1.2250, kunye ne-1.2500, kwaye amanqanaba am enkxaso ayi-$ 1.1500, i-$ 1.1000, kunye ne-$ 1.0500.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.71 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 54.6 billion
Ukulawula kweRipple: 2.01%
← Entsha izithuba1 2 ... 9 abaDala izithuba →